ब्रोकरको भूमिका सेयर खरिद–बिक्रीमा सीमित हुनुहुँदैन - Karobar National Economic Daily
ब्रोकरको भूमिका सेयर खरिद–बिक्रीमा सीमित हुनुहुँदैन
query_builderAugust 27, 2017 10:47 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1391
सन्तोष पौडेल कार्यकारी अध्यक्ष सनि सेक्युरिटीज कम्पनी
सेयर बजारमा लगानी गर्नु जोखिम बढाउनु हो । तर, जोखिमलाई पनि उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सके प्रतिफल आउने सनि सेक्यूरिटीजका कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।
विद्यार्थी जीवनदेखि नै सेयर बजारमा छिर्ने सोच लिएका पौडेल हाल धितोपत्र दलाल व्यवसायीको रूपमा सक्रिय छन् । विगत ६ वर्षदेखि सेयर बजारको व्यवसायमा संलग्न पौडेलले व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातक गरेका छन् ।
सेयर बजारमा कुनै पनि घटनाको प्रत्यक्ष असर भन्दा पनि मनोविज्ञानले धेरै काम गर्ने बताउने पौडेलसँग सेयर बजारका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समयको सेयर बजारको गतिविधिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
विगत केही सातादेखि सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) घटेको देखिन्छ । तर, यो घटाइले बजार घट्दो क्रममा जान लागेको भन्ने पनि देखिँदैन । त्यसका साथै बजारले बढ्ने संकेत पनि गरिसकेको छैन ।
यसको मतलब हो, बजार स्थिर छ । सेयर बजार घट्छ वा बढ्छ भन्ने कुरा सेयर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सेयर बजार परिसूचक घटेको भए पनि कारोबार रकम बढेको थियो । हाल सूचीकृत कम्पनीहरूले लाभांश दिने समयमा भएकाले घट्नुपर्ने अवस्था होइन ।
सूचीकृत कम्पनीको उच्च दरमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले दिर्घकालमा प्रतिफलमा प्रभाव पर्ने लगानीकर्ताको विश्लेषण हुन सक्छ । सेयर बजारमा दिर्घकालीन रूपमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको मानोविज्ञान केही कजोर भएको हुन सक्छ । त्यसले गर्दा केही नकारात्मक भएको हुनसक्छ । तर, सेयर बजारका लागि विकास भएका पूर्वाधारले बजार बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।
आगामी दिनमा बजारले कुन मोड लिन सक्ने देख्नुहुन्छ ?
हाल १६१७ बिन्दुमा रहेको सेयर बजार परिसूचक विगतको तुलनामा घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बजार धेरै तल झर्ने सम्भावना छैन । हाल बजारमा देखिएको गतिविधिले पनि बजार धेरै घट्ने देखाउँदैन ।
पछिल्लो समयमा सेयर मूल्य समायोजन भए पनि कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको अवस्था छैन । साथै समायोजन गरिएको मूल्यमा सेयर किन्ने लगानीकर्ता धेरै छन् । पछिल्लो समयमा कम्पनीले दिएको हकप्रद तथा लाभांशका कारण सेयर मूल्य समायोजन भए पनि खरिदकर्ता छन् । सेयर मूल्य मोलमोलाई गरेर किन्ने लगानीकर्ता बजारमा आएका छन् । त्यसले गर्दा हाल केही घटेजस्तो देखिए पनि दिर्घकालमा बढ्छ ।
त्यसका साथै बजार विकासका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गरेका काम कारबाही विगतको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । पुँजी बजार आधुनिक भएर अघि बढेको खण्डमा घट्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
त्यसका साथै धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले पनि संस्थागत सुधार गरेको अवस्था छ । त्यसकारण बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरू नै बजारको विकासका लागि लागेको हुनाले भोलिका दिनमा बजार बढ्ने देखिन्छ ।
तराई क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोका कारण सेयर बजारमा कस्तो असर देखिएला ?
तराई क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यसले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ नै । प्रत्यक्ष असर भनेको उपत्यका भन्दा बाहिर तराई क्षेत्रमा रहेका दलाल कम्पनीका कार्यालयहरूको कारोबार घटेको छ ।
त्यसको अलावा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर अप्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारमा आउँछ नै । अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा असर गरेको हुनाले सेयर बजारमा पछि असर आउन सक्छ ।
तपाईंहरू सेयर बजारको कार्यान्वयन इकाइको रूपमा हुनुहुन्छ, लगानीकर्तालाई देख्ने पहिलो आँखा तपाईंहरूको नै हो । पछिल्लो समयमा सेयर बजार अस्थिर देखिएको छ, यो अवस्था सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई कसरी लगानी गर्न सुझाव दिनुहुन्छ ?
सेयर लगानीकर्ताले राखेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले लगानीकर्ताको लगानी योजना सोध्छांै । लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताले सेयर बजारमा कस्तो सोच राखेर आएको छ । त्यसलाई बुझेर बजारमा आएका आधिकारिक सूचनाहरू हामीले सेयर गरिदिन्छांै । लगानी गर्ने लगानीकर्ता बजारप्रति कत्तिको सचेत भएर आएका छन्, त्यसमा हामीले सक्ने मद्दत गर्छौं ।
लगानीकर्तालाई सेयरमा लगानी गर्नुअघि बजारसम्बन्धी ज्ञान लिएर मात्र लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कुन कम्पनीको सेयर किन्ने हो, त्यसका लागि कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा कम्पनीले प्रतिफल वितरणको अवस्था विश्लेषण गरेर खरिद गर्न सुझाव दिन्छौं । हामीले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्तालाई सल्लाह सुझाव दिन पाइँदैन ।
हामीले लगानीकर्ता काउन्सिलीङको काम गर्न पाउने भए त्यहीअनुसार पूर्वाधार तथा जनशक्ति तयार गरेर काम गर्न सक्थ्यौं । हालको अवस्थामा कम्पनीले आधिकारीक रूपमा दिएका सूचनाहरू मात्र लगानीकर्तालाइ दिने गरेका छांै ।
धितोपत्र बजारको विकासका लागि धितोपत्र व्यवसायीहरूको भूमिका त धेरै हुन्छ, तपाईंहरूले सेयरको खरिद र बिक्री गरेर मात्र बजारको विकासमा कस्तो योगदान दिन सक्नुहुन्छ ?
सेयरको खरिद र बिक्री गर्न मध्यस्तकर्ताको भूमिकामात्र निर्वाह गरेको खण्डमा बजार विकासमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको भूमिका धेरै रहन सक्ने देखिँदैन । धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई बजार एउटा हिस्सा बनाउने हो भने कार्यक्षेत्रको विस्तार गर्नु जरुरी छ ।
त्यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्र्डले केही प्रक्रिया सुरु पनि गरेको छ । दलाल कम्पनीले इन्भेष्टर्स काउन्सीलिङ, मार्जिन ल्याण्डिङ, ब्रोकर डिलर तथा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम दिनुपर्छ । हालको अवस्थामा धितोपत्र दलाल व्यवसायी क्षमतावान भएको खण्डमा पनि काम गर्न पाएका छैनन् ।
हाल बजार विगतको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ ।
अझै पनि बजारमा अक्सन मार्केट, इन्भेष्टर्स प्रोटेक्सन फण्ड, अनलाइन कारोबार लगायतका व्यवस्था हुनु जरुरी छ । अनलाइन आउँछ भन्दा पूर्ण आउने हो कि आंशिक आउने हो, त्यसमा हामीले मात्र भन्दा पनि बजारका सम्बद्ध पक्षहरूको समन्वय गरी अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । यो सबै भएको खण्डमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले बजार विकासमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् ।
सनि सेक्यूरिटीजको कार्यसम्पादन अवस्था कस्तो छ ?
स्थापनाकालमा कम्पनीले सञ्चालन खर्च कमाउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा ब्रोकर कमिसन घटेपछि भने आम्दानी घटेको छ । आम्दानी घटेको तर खर्च बढेको छ । कामका स्कोपहरू विस्तार भएका छैनन् ।
कम्पनीले दिने सेवा विस्तार भएको खण्डमा आम्दानी गरेर कम्पनी सञ्चालनमा समस्या हुँदैन । मार्जिन ल्याण्डिङ तथा इन्भेष्टर्स काउन्सिलीङ काम ब्रोकर डिलर, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम दिएको खण्डमा बजारको विकाससँगै दलाल कम्पनीको आम्दानी पनि हुने देखिन्छ ।
सेयर बजार नेप्से सन्तोष पौडेल